iFoto Viewer maimaim-poana ao amin'ny Mac App Store mandritra ny fotoana voafetra | Avy amin'ny mac aho
iFoto Viewer maimaim-poana ao amin'ny Mac App Store mandritra ny fotoana voafetra
[Nohavaozina] Ny fampiharana dia nidina tamin'ny vidiny mahazatra € 9,99 ora vitsy lasa izay.
Izahay dia mitondra mailaka tsara ho anao mba hijerena sary, izay hita ao amin'ny magazay fampiharana Apple ho an'ny Mac. Ary tsy inona izany fa, fampiharana tsotra nefa azo ampiharina hijerena sary. Priori, mety ho programa tsotra loatra izy io, satria misy fampiharana hafa, ao anatin'izany Preview manao an'io asa io.
iFoto Viewer, manana fiasa maro hafa izy amin'ny fijerena sary noho ny fampiharana hafa ao amin'ny faritra misy azy. Ny fiasa tiako indrindra dia ny fahaizana manokatra saika ny endrika rehetra, ao anatin'izany ny RAW be dia be.
Ny dingana voalohany dia ny manafatra ireo sary. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny fisafidianana azy ireo mivantana, ny fisafidianana ireo lahatahiry, na ny fitarihana sary na lahatahiry ao amin'ilay fampiharana.
Ny vahaolana amin'ny fisehoana sary dia vahaolana avo lentana dia ampiasaina amin'ny fampisehoana retina aza. Fomba fiasa vaovao no ahodino mandeha ho azy ilay sary rehefa hitany fa tsy nanafarana azy tamin'ny toerana marina. Ity asa ity, na dia tsotra aza toa toa, dia milaza aminao aho fa mety ho azo ampiharina amin'ny Photos, ny fakana sary an'i Apple, satria rehefa mitantana sary be dia be ianao dia ankasitrahana fa misafidy ny fomba marina ianao. Safidy hafa mitovy amin'izany, ny mitahiry ny toeran'ny zoom rehefa manova ny sary isika, izany hoe tsy miverina amin'ny toeran'ny sary mahazatra.
Misy fomba fampisehoana maromaro:
Maody sary marobe.
Maody efijery feno: hijery ny sary fa tsy misy zavatra hafa, raha tsy misy ny interface interface.
Fomba fitehirizam-boky: hivezivezy eo anelanelan'ny lahatahiry rafitra.
Thumbnail mode: raha hijery sary maro miaraka ary afaka mifidy ny takiana / s.
Mode EXIF: mba hanivanana sary isaky ny ISO, karazana fakantsary, na endri-javatra hafa, ary
Mode fampisehoana: hijery sary tsirairay avy ho azy.
Farany, azo zaraina ny sary tambajotra sosialy: Facebook, Twitter, Flickr ary tranonkala hafa
Maimaimpoana ny fampiharana ao amin'ny Mac App Store, raha tsy maintsy vidiana hatramin'ny € 9,99 izy hatramin'izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » iFoto Viewer maimaim-poana ao amin'ny Mac App Store mandritra ny fotoana voafetra
vla1956virginia dia hoy izy:
liarsssssss tsy misy zavatra maimaim-poana
Mamaly an'i vla1956virginia
Ny Beats X dia misy amin'ny loko rehetra ary misy famandrihana maimaim-poana amin'ny Apple Music 3 volana
Apple dia manitatra ny isan'ny firenena hividy ny Pro Apps Package